XOG HOOSE:-Maxaa ka soo baxay kulankii caawa ee Farmajo, Fahad & Saraakishii Itoobiyaanka -News and information about Somalia
Home Warkii XOG HOOSE:-Maxaa ka soo baxay kulankii caawa ee Farmajo, Fahad & Saraakishii...
XOG HOOSE:-Maxaa ka soo baxay kulankii caawa ee Farmajo, Fahad & Saraakishii Itoobiyaanka
Waxaa caawa shir albaabada u xiran yahay Villa Somalia kuwada yeeshay saraakiishii Itoobiyaanka ahayd ee maanta ku soo hungoobay magaalada Kismaayo iyo MW Farmaajo oo uu dhinac fadhiya T/X NISA Fahad Yasin oo saraakiishan ka keenay magaalada Addis Ababa.
Waxaa kulanka loo diiday in uu ka soo qeyb galo RW Kheyre taasoo dhalisay buuq iyo muran dhex maray shaqaalaha hab maamuuska labada xafiis sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareed goob ka ahaa muranka.
Sida ilo xog ogaal ay u xaqiijiyeen Warkii.com, saraakiisha Itoobiyaanka ah aya waxaa adduun dhan $4.7 Milyan lagu siiyay in ay is hortaagaan in uu Axmed Madoobe isku sharaxo jagada mar labaad hoggaanka Jubbaland.
Saraakiishan oo ah kuwii bishii Desember ee sanadkii hore 2018 loo adeegsaday doorashadii Koofur Galbeed oo ay ka dhacday xasuuq shacab taasoo sababtay markii uu warqad ka soo saaray Nichola Haysom in dalka laga ceyriyo.
Saraakiishan aya hore ugu guuleystay in ay ku qasbaan in uu xilka isaga tago isla markaana uu ka tanaasulo musharaxnimadiisa Sharif Xasan markii danbana ay soo xireen Mukhtaar Roobow.
Farmaajo iyo Fahad aya ku hungoobay in sidii ay Koofur Galbeed u maquuniyeen hoggaankooda ay u maquuniyaan doorashada Jubbaland.
Kulanka caawa aya waxaa looga arrin saday wixii laga yeeli lahaa doorashada la filaayo in bishan 19 Ogoosto ay ka dhacdo magaalada Kismaayo.
Qodobada laga wada hadlay aya waxaa ka mid ah.
In dagaal u abaabulan qaab qabiil laga dhex abuuro magaaada Kismaayo maalmaha soo socdo si rabashadaha halkaa ka dhasha ay faragelin toos ah ugu sameeyaan ciidanka Itoobiya ee ku sugan xuduuda Gedo.
Fekerkan aya waxa wato Fahad Yasin.
In si toos ah ay ciidamda Itoobiya u soo galaan magaalada Kismaayo kaddibna ay qasab ku qabsadaan magaalada si doorashada ay dib ugu dhacdo Axmed Madoobana uu ogolaado in musharaxiinta Farmaajo ay is diiwaan geliyaan (Fekerkan waxaa keenay Farmaajo)
Saraakiisha Itoobiya ayaanan siin jawaab waafi ah Farmaajo & Fahad waxayna ballan qaadeen in ay Addis Ababa kula noqon doonaan labada feker wixii ka soo baxana ay ku fulin doonaan 48 saac gudahood.
Lama oga in dowladda Itoobiya ay labada feker mid qaadan doonaan, balse waxaa Warkii.com ay ilo wareedyo xog ogaal ah u sheegeen in beesha caalamka ay maalmaha soo socdo tegi doonaan magaalada Kismaayo si loo hubiyo doorashada lagu wado in ay dhacdo maalinta Isniinta ah ee foodda nagu soo hayso.
Previous articleDhakhaatiirtii Cubanka ahayd oo la ogaaday in lagu hayo Gobolka Gedo
Next articleWAR CUSUB:-James Swan oo lagu wado in uu berito tago Kismaayo
Guddoomiyaha Aqalka Sare Ee Dalka Oo Gaaray Qatar Iyo Ujeedka Safarkiisa
Loolanka Qatar iyo Sucuudiga ee Soomaaliya iyo aqoonsiga baasaboorka Somaliland.